Madaxweyne Shariif oo Villa Baydhabo u soo guuray | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweyne Shariif oo Villa Baydhabo u soo guuray
Muqdisho(keydmedia) Madaxweynaha dowladda KMG ah Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed ayaa dhawrkii casho ee la soo dhaafay deegaansanayay xarunta cusub ee ciidamada Milatariga Villa Baydhaba.
Shariif Shiikh Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sababata uu ugu sugnaa Villa Baydhabo in ay aheyd tayeenta iyo taaba galinta ciidamada isagoona xusay in raja wanaagsan iminka laga qabo tayada iyo awooda guud ee ciidamada Dowladda gaar ahaan ciidamada Xooga.
Madaxweynaha ayaa shalay galinkii danbe lagu arkay Villa Baydhabo isaga oo ku labisan dharka ciidanka isla markaana la jooga saraakiil ka tirsan ciidamada xooga, waxaana uu hoosta ka xariiqay in xili dhaw ay ciidmada Milatariga talaabo qaadi doonaan si loo xureeyo dalka iyo dadka.
Ma ahan arin cusub in madaxweyne shariif uu xirto dharka ciidanka uuna sheego isbadal in ay sameyn doonaan ciidamada balse wxaa laga war dhawrayaa waxa uu soo kordhiyo hadalka iminka ka soo baxay.
Dhanka kale waxa uu ayaan daro ku tilmaamay dagaalka u dhaxeeya kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee laga dareemayo saansaantooda deegaanada loo barakacay ee duleedka Muqdisho waxaana uu ugu baaqay in ay dowladda isu soo dhiibaan kooxaha mucaaradaka.